Dhijitari Shanduko inyaya yehutungamiriri, Kwete Nyaya yeTekinoroji | Martech Zone
Dhijitari Shanduko inyaya yehutungamiriri, Kwete Nyaya yeTekinoroji
Chipiri, Gunyana 16, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kwemakore anopfuura gumi, tarisiro yekubvunza kwangu muindasitiri yedu yanga ichibatsira mabhizinesi kubaya nekushandura makambani avo manhamba. Kunyangwe izvi zvichiwanzofungidzirwa seimwe mhando yepamusoro-pasi kusunda kubva kune vanoita mari, bhodhi, kana Chief Executive Officer, unogona kushamisika kuona kuti hutungamiriri hwekambani husina ruzivo uye hunyanzvi hwekukwiridzira shanduko yedhijitari. Ini ndinowanzo shandirwa nehutungamiriri kubatsira kambani manhamba kushandura - uye zvinongoitika kutanga nemikana yekutengesa neyekushambadzira nekuti ndipo panowanikwa mhedzisiro inoshamisa nekukurumidza.
Sezvo kuderera kwenzira dzechinyakare kuri kuenderera uye kuwanda kwemitengo yemadhijitari isingadhuri yakwira, makambani anowanzo shupika kuita shanduko. Pfungwa dzenhaka nehurongwa hwenhaka zvinokunda, nema analytics uye negwara rakashaikwa. Nekushandisa nzira yekukurumidza, ini ndinokwanisa kuendesa vatungamiriri nedigital yavo kushambadza kukura mukati meindasitiri yavo, pakati pevanokwikwidza, uye nekuremekedza vatengi vavo. Ihwohwo humbowo hunopa kujekesa kuti tinoda kushandura bhizinesi Kana tangova nekutenga-mukati, tinobuda munzira yekushandura bhizinesi ravo.
Ndiri kugara ndichishamisika kuti vashandi vakagadzirira kudzidza uye kubhadharisa ... asi kazhinji manejimendi nehutungamiriri zvinoramba zvichirova mabreak. Kunyangwe pavanoona kuti imwe nzira yekushandurwa kwedigital uye Agility kutsakatika, vanosundira kumashure vachitya shanduko.
Kutaurirana kwakashata kumusoro-pasi uye kushomeka kwehutungamiriri shanduko matambudziko akakura anodzivisa kufambira mberi mukushanduka
Maererano chazvino kudzidza kubva kuNintex, kushandurwa kwedhijitari hakusi kwakawanda tekinoroji nyaya sezvo iri nyaya yetarenda. Ndosaka vanopa mazano seni vari kudiwa zvakanyanya izvozvi. Nepo makambani aine anoshamisa tarenda emukati, iyo tarenda haiwanzo kuburitswa nenzira nyowani, mapuratifomu, midhiya uye maitiro. Maitiro akaomarara anogara achigadzika nematanho evatariri achiona kudzikama kwawo… izvo zvinogona kunge zvichitadzisa izvo chaizvo zviri kudikanwa.
chete 47% yemutsara wevashandi vebhizinesi vari kutoziva nezve shanduko yedhijitari iri - ndoda kuti kambani yavo
ine hurongwa hwekugadzirisa / kuzadzisa shanduko yedigital.
67% yevatungamiri ziva shanduko yedhijitari inofananidzwa ne 27% chete yevasiri-mamaneja.
Pasinei 89% yeavo vanoita zvisarudzo vachiti ivo vane yakasarudzika shanduko inotungamira, hapana munhu mumwe anouya semutungamiri akajeka kumakambani.
Icho chakakosha kunze kwekusiyana kwekuziva ndeye IT mutsara wevashandi vebhizinesi, 89% yavo vanoziva chinonzi shanduko yedigital.
Mukukurukurirana kwedu nevatungamiriri veIT pane yedu Dell Mwenje podcast, tinoona mutsauko hutungamiri hwakasimba huri kuita kumasangano. Aya masangano haatombogadzikane kugadzikana. Tsika yekushanda yemasangano aya - mazhinji emakambani epasi rese ane makumi ezviuru zvevashandi - ndeyekuti shanduko inoenderera ndiyo yakajairika.
Chidzidzo cheNintex kudzidza chinotsigira izvi. Yakanangana nesangano rekutengesa, chidzidzo chinoburitsa:
60% yezvakanaka zvekutengesa havana ruzivo rwekuti shanduko yedigital ndeipi
40% yevashandi vekutengesa vanodavira chinopfuura chikamu chimwe muzvishanu chebasa ravo chinogona kugadziriswa
74% vanotenda zvimwe zvebasa ravo zvinogona kugadzirwa.
Masangano avanoshandira kushaya hutungamiriri pamaitiro ekuita shanduko nekushandisa hungwaru hwekugadzira uye otomatiki kuvhara iro gaka. Zvinosuruvarisa, chidzidzo ichi chinoburitsa pachena kuti 17% yezvakanaka zvekutengesa hazvitombobatanidzwe muhurukuro dzekushandurwa kwedhijitari ne12 muzana isingabatanidzwe zvishoma.
Dhijitari Shanduko haisisiri Risk Risk
Shanduko yanhasi yedhijitari haina kana njodzi kana ichienzaniswa nemakore gumi apfuura. Nehunhu hwedhijitari hwevatengi hunowedzera kufungidzira uye huwandu hwemapuratifomu anodhura achiwedzera, makambani haafanire kuita mari hombe yemari yavaimboita kuita makore mashoma apfuura.
Case in point ikambani yandiri kubatsira nemasaini edhijitari. Mutengesi akauya nechikuru chitaurwa chingadai chakatora mwedzi kuti adzokere, kana vachitogona. Izvo zvaida hurongwa hwekuchengetedzeka hwaive hwayo uye hwaichengetwa nemutengesi, ichida zvese kunyoreswa papuratifomu yavo uye kutenga yavo yemidziyo Hardware. Kambani yakandibata ikandikumbira rubatsiro saka ndakasvika kunetiweki yangu.
Yakakurudzirwa nemumwe wangu, ini ndakawana mhinduro yakashandisa AppleTVs uye HDTVs pasherefu uye ndokumhanyisa chikumbiro chinodhura chete $ 14 / mo pachiratidziri - Kitcast. Nekusafanirwa kuita mari hombe yekudyara uye kushandisa zvisirizvo-pasherufu mhinduro, kambani iri kuzobhadharisa izvo zvinodhura chingangoita hurongwa. Uye izvi zvinosanganisira mari yangu yekubvunza!
Mukuongorora nyaya ye Sears 'achangobva kubhuroka, Ndinofunga izvi ndizvo chaizvo zvakaitika. Wese munhu wemukati akanzwisisa kuti kambani yaida kushandurwa, asi vakashaya hutungamiriri kuti zviitike. Kugadzikana uye chinzvimbo-quo yaive yagadzika mukati memakumi emakore uye manejimendi manejimendi aitya shanduko. Iko kutya uye kusakwanisa kuchinjisa kwakatungamira mukufa kwavo kusingadzivisike.
Shanduko yeDhijitari Isina Kukodzera Inotyirwa Nevashandi
Mutsara wechikonzero wevashandi vebhizinesi havasi kuwana memo nezvekushandurwa kwekuedza - uye vasina hwaro hwekutya basa semhedzisiro - ndechekuti hapana mutungamiri akajeka kumashure kweshanduko. Nintex yakawana kushomeka kwekubvumirana nezvekuti ndiyani anofanirwa kutungamira kushandurwa kwedhijitari mukati mesangano.
Nekuda kwekushayikwa kwavo kwekuziva, mutsara wevashandi vebhizinesi vane mukana wekuona shanduko yekambani yavo uye nekushandisa otomatiki se kutyisidzira mabasa avo, kunyangwe zvisiri izvo. Vanenge chikamu chimwe muzvitatu chevashandi vanonetseka kushandiswa kwehunyanzvi kugona kunoisa panjodzi mabasa avo. Asi, ruzhinji rwemabasa haruzoendi semhedzisiro yehungwaru maitiro otomatiki.
Mukati memadhipatimendi ekushambadzira nekutengesa andinoshanda nawo, makambani akatoveura zviwanikwa zvavo kusvika padiki. Nekudyara mukushandurwa kwedhijitari, hapana mukana wekubvisa, pane mukana wekushandisa tarenda rako zvinobudirira. Kuburitsa hunyanzvi uye hunyanzvi hwezvikwata zvako zvekutengesa uye zvekushambadzira ndiko pakupedzisira mukana wepamusoro wekushandurwa kwedigital!
Dhawunirodha Iyo State yeAngwara Nzira Yekushandisa Yekudzidza
Tags: shanduko yedhijitaridownloadmarketing automationnintexPDFgadzira otomatiki kudzidzaripotikutengesa kushandisa michinakushandurwa kwekutengesa
Maitiro Echigadzirwa Mutengo Pamhepo Unogona Kukanganisa Kutenga Maitiro
Kugovera Hakuna Kukwana - Nei Uchifanira Iyo Yemukati Yekusimudzira Sisitimu